Ukulawulwa Kwekhwalithi - Chengdu Zhengxi Hydraulic Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Inqubomgomo yekhwalithi, Inhloso, Ukuzibophezela
Ikhasimende kuqala; ikhwalithi kuqala; inqubo eqinile yokulawula; ukudala umkhiqizo wesigaba sokuqala.
Izinga lokwaneliseka kwamakhasimende lifinyelela ku-100%; ukulethwa okufika ngesikhathi kufinyelela ku-100%; Imibono yamakhasimende iyacutshungulwa futhi iphendulwe ngo-100%.
Umhlangano Wokusebenzela Wokuqala
1. Uhlelo lwekhwalithi: Ukuze ulawule kahle izinto ezithinta ubuchwepheshe bomkhiqizo, abaphathi nabasebenzi ukuvimbela nokuqeda imikhiqizo engenazibopho, inkampani isungule umqulu wohlelo lwekhwalithi ngendlela ehleliwe futhi ehlelekile, futhi yalusebenzisa ngokuqinile ukuqinisekisa ukuqinisekiswa kwekhwalithi Uhlelo lusaqhubeka nokusebenza .
Ukulawulwa kokuklama: ukuqinisekisa ukuthi ukuklanywa komkhiqizo nentuthuko kuhlelwa futhi kwenziwa ngokulandela inqubo yokulawulwa komklamo ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo uhlangabezana nezindinganiso zikazwelonke ezifanele nezidingo zomsebenzisi.
Ukulawulwa kwemibhalo nezinto zokwakha: Ukuze kugcinwe ukuphelela, ukunemba, ukufana nokusebenza kahle kwayo yonke imibhalo ehlobene nekhwalithi nezinto zokwakha zenkampani, nokuvikela ukusetshenziswa kwemibhalo engavumelekile noma engavumelekile, inkampani ilawula ngokuqinile imibhalo nezinto zokwakha.
4.Ukuthenga:Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zekhwalithi yemikhiqizo yokugcina yenkampani, inkampani ilawula ngokuqinile ukuthengwa kwezinto eziluhlaza nezisizayo nezingxenye zangaphandle. Ukulawulwa okuqinile kwezinqubo zokuqinisekisa iziqu zabaphakeli nezinqubo zokuthenga.
Ukukhonjwa komkhiqizo:Ukuvikela izinto zokusetshenziswa nezingasizi, izingxenye ezithunyelwa ngaphandle, imikhiqizo eqediwe kanye nemikhiqizo eseqedile ukuthi ingahlanganiswa ekukhiqizweni nasekujikelezeni kwegazi, inkampani ibeke indlela yokumaka imikhiqizo. Lapho izidingo zokulandelela zichaziwe, umkhiqizo ngamunye noma iqoqo elithile lemikhiqizo kufanele likhonjwe ngokukhethekile.
6.Inqubo yokulawula: Inkampani ilawula ngempumelelo inqubo ngayinye ethinta ikhwalithi yomkhiqizo kunqubo yokukhiqiza ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo wokugcina uhlangabezana nezidingo ezichaziwe.
7.Ukuhlolwa nokuhlolwa: Ukuze kuqinisekiswe ukuthi ngabe izinto ezahlukahlukene enqubweni yokukhiqiza ziyahlangabezana nezidingo ezibaluliwe, izidingo zokuhlola nezokuhlola ziyachazwa, futhi kufanele kugcinwe amarekhodi.
Ukuhlolwa kokuhlolwa nokuhlolwa
B. Ukuhlolwa kwenqubo nokuhlolwa
C. Ukuhlolwa kokugcina nokuhlolwa
8.Ukulawulwa kokuhlolwa, ukukala nemishini yokuhlola: Ukuze kuqinisekiswe ukunemba kokuhlolwa nokukalwa nokuthembeka kwenani, futhi kuhlangatshezwane nezidingo zokukhiqiza, inkampani ibeka ukuthi izinto zokuhlola, zokulinganisa nezokuhlola kufanele zilawulwe, zihlolwe futhi zilungiswe ngokuya ngemithetho.
Umhlangano Wokusebenzela 2 (I-Lathe Enkulu)
1. Ukulawulwa kwemikhiqizo engafanelekile: Ukuvikela ukukhishwa, ukusetshenziswa nokulethwa kwemikhiqizo engafanelekile, inkampani inemithetho eqinile ekuphathweni, ekuhlukanisweni nasekuphathweni kwemikhiqizo engafanelekile.
2. Izindlela zokulungisa nokuvimbela: Ukuze kususwe izinto ezingokoqobo noma ezingaba khona ezingafanelekile, inkampani ilawule ngokuqinile izindlela zokulungisa nokuvimbela.
3. Ezokuthutha, ukugcina, ukupakisha, ukuvikela nokulethwa: Ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yokuthengwa kwangaphandle nemikhiqizo eqediwe, inkampani isungule imibhalo eqinile futhi ehlelekile yokuphathwa, ukugcinwa, ukupakishwa, ukuvikelwa nokudilivwa, futhi yakulawula ngokuqinile.